Umbono we-Geocentric. Izici nemvelaphi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ezikhathini zasendulo wawungeke ube nolwazi oluningi ngomkhathi unikezwe ubuchwepheshe obuncane bokuqapha obabutholakala ngaleso sikhathi. Ngokunikezwa okuncane okwakungaziwa ngengaphandle loMhlaba, kwakucatshangwa ukuthi iplanethi yethu iyisikhungo sendawo yonke nokuthi ezinye izitshalo kanye neLanga zazungeza thina. Lokhu kwaziwa njenge umbono we-geocentric futhi umdali wayo kwakunguPtolemy, isazi sezinkanyezi esingumGreki esaphila ngo-130 AD
Kulesi sihloko uzofunda konke mayelana nombono we-geocentric nezici zawo. Uzokwazi nokwazi ukuthi imuphi umbono owalethile.
1 Umhlaba njengesikhungo sendawo yonke
2 Izici zethiyori ye-geocentric
3 Iziqinisekiso zeBhayibheli
4 Umbono we-Geocentric kanye ne-heliocentric
Umhlaba njengesikhungo sendawo yonke
Abantu basebenzise izinkulungwane nezinkulungwane zeminyaka bebuka izinkanyezi. Umqondo wendawo yonke uguqulwe kaningi kangangokuba ungabalwa. Ekuqaleni uMhlaba kwakucatshangwa ukuthi uyisicaba futhi uzungezwe iLanga, iNyanga, nezinkanyezi.
Ngokuhamba kwesikhathi kwaziwa ukuthi izinkanyezi bezingazungezi nokuthi ezinye zazo bekungamaplanethi afana noMhlaba. Kwaqondwa futhi ukuthi uMhlaba uyindilinga futhi waqala ukunikeza izincazelo ezithile ngokuhamba kwezindikimba zezulu.
Umbono owawuchaza ukuhamba kwezindikimba zasezulwini njengomsebenzi wesimo seplanethi yethu kwakuyinkolelo-mbono yomhlaba. Lo mbono wachaza ukuthi iLanga nenyanga kanye namanye amaplanethi azungeze kanjani esibhakabhakeni. Futhi, njengoba nje ubheka umkhathizwe bese ubona okuthile okuyisicaba okukwenza ucabange ukuthi uMhlaba uyisicaba, ucabanga ukuthi uMhlaba maphakathi nendawo nendawo nakho kuyinto engokwemvelo.
Kubantu basendulo lokhu kuyaqondakala. Kumele ubheke esibhakabhakeni ukubona ukuthi iLanga lihamba kanjani usuku lonke, kanye nezinkanyezi nenyanga. Ngaphandle kokukwazi ukubona iplanethi yethu kusuka ngaphandle, akunakwenzeka ukwazi ukuthi uMhlaba awuyona inkaba yendawo yonke. Kumqapheli ebusweni, wayeyiphuzu elinqunyelwe elibuka yonke indawo ijikeleza.
Inkolelo yombono we-geocentric kamuva yachithwa ngu inkolelo ye-heliocentric ehlongozwe ngu UNicolaus Copernicus.
Izici zethiyori ye-geocentric
Kuyisibonelo esakha indawo yonke maqondana nesimo seMhlaba. Phakathi kwezitatimende eziyisisekelo zalo mbono sithola:
Umhlaba uyisikhungo sendawo yonke. Yamanye amaplanethi ahamba kuwo.
Umhlaba uyiplanethi ehleliwe emkhathini.
Iyiplanethi eyingqayizivele nekhethekile uma siyiqhathanisa nezinye izidalwa zasezulwini. Lokhu kungenxa yokuthi ayinyakazi futhi inezici ezihlukile.
EBhayibhelini ungabona isitatimende sokuthi uMhlaba uyiplanethi ekhethekile enezici ezihlukile esahlukweni sokuqala sikaGenesise. Amanye amaplanethi adalwa ngosuku lwesine lokudala. Ngalesi sizathu, uNkulunkulu wayesevele edale uMhlaba nawo wonke amazwekazi, wayesebumbe izilwandle futhi wakhiqiza uhlaza ngaphezulu. Ngemuva kwalokho, wagxila ekwakheni okusele kwe- Uhlelo lomkhathi. EBhayibhelini, umbono wokuthi ukudalwa koMhlaba bewuhluke kakhulu kwamanye amaplanethi, iMilky Way, njll. Kucace bha.
Kuze kube manje, yonke imizamo yesayensi yokuzama ukuthola impilo kwenye iplanethi iyehluleka. Ngenkathi kwiplanethi yethu kunokuningi kokuphilayo kanye nemvelo enezinto eziningi zokuphila, kwamanye amaplanethi asesibhakabhakeni kubonakala kungekho impilo yanoma yiluphi uhlobo. Yizindawo ezinobutha. Konke lokhu kukhombisa ukuthi uMhlaba ubunezimo ezahlukahlukene zokudala kunezinye futhi kungalesi sizathu sisenkabeni yendawo yonke.
Yize kubukeka sengathi kuyaphikisana, eBhayibhelini akusho ndawo ukuthi uMhlaba uyisikhungo sendawo yonke, kepha uthi wenziwe ngokomongo okhethekile.
Obunye ubufakazi balokhu eBhayibhelini ukuthi akushiwo ukuthi ngabe indawo yonke inomkhawulo noma ayinamkhawulo. Ngokomqondo we-geocentric, indawo yonke iphelela odongeni lwezinkanyezi ezihleliwe. Ngale kwalolu ungqimba lwezinkanyezi akukho lutho. Akunasikhathi ushilo noma unikeze izincazelo zokuthi ngabe uMhlaba uhamba yini emkhathini kuGenesise. Lonke lolu lwazi luzodingeka ukuluqhathanisa neBhayibheli ukuze wazi ukuthi luqinisekisa kangakanani ukuthi umhlaba umi kanjani nokwakhiwa kwendawo yonke.
Isimo sendawo yonke yisihloko sesayensi esiheha abacwaningi kancane. Noma kunjalo, lokhu akunandaba ngokweBhayibheli. Kunikezwe EBhayibhelini akukho okuchazwayo mayelana nezinto ezibonakalayo zoMhlaba nokwakheka kwendawo yonke, asikwazi ukuthi kunombono weBhayibheli.
Umbono we-Geocentric kanye ne-heliocentric
Le mibono emibili yehluke ngokuphelele, njengoba iyizibonelo ezibheka isayensi yezinkanyezi ngamaphethini ahlukene. Ngenkathi i-geocentrism ithi uMhlaba uyisikhungo sendawo yonke, i-heliocentrism ithi yiLanga elinendawo emile futhi wonke amaplanethi, kufaka phakathi awethu, ayajikeleza.
Yize u-Aristotle ehlobene nale mbono, nguPtolemy owayibhala kuyi-Almagest. Lapha kwahlanganiswa imibono ehlukahlukene yokuhamba kwamaplanethi, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwama-epicycle asiza ekuchazeni imizila. Lolu hlelo lwashintshwa futhi lwaba yinkimbinkimbi njengoba lwalusebenza amakhulu eminyaka ayi-14. Ngesikhathi uNicolaus Copernicus edala umbono osenkabeni yelanga, waguqula uMhlaba waba yiLanga kuphela njengesikhungo sendawo yonke.
Yomibili le mibono ayilungile ngokuthi indawo yonke iphelela odongeni lwezinkanyezi ezihleliwe. Namuhla kuyaziwa ukuthi indawo yonke ayinamkhawulo nokuthi kuningi okungaphezulu kweSolar System yethu.
Njengoba ukwazi ukubona, imibono mayelana nesikhala sangaphandle iyashintsha njengoba ubuchwepheshe bukhula. Ngiyethemba lolu lwazi lukusiza ukwazi okuningi ngemfundiso ye-geocentric.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umbono we-Geocentric
sawubona wangisiza ngafunda umusa hehehe
Ngosizo olukhulu !!!
UCESAR ALEJANDRO TORRES kusho
Ngiyabonga kakhulu, kube wusizo olukhulu, usuku oluhle
Phendula ku-CESAR ALEJANDRO TORRES